Qaababka Saamaynta Kadib ee Bilaashka ah: Apps-ka ugu Wanaagsan ee la soo dejiyo | Hal-abuurka khadka tooska ah
Tafatirka fiidyaha iyo isu-ururinta, oo ay ku jiraan animations, waxay noqdeen qayb aad muhiim u ah naqshadaynta garaafyada. Maalin kasta waxaa jira naqshadeeyayaal doorta qaybtan waana wax iska caadi ah, maadaama aan dhammaanteen jecelnahay inaan aragno filim khayaali saynis ah oo ay ku raran yihiin saameyn gaar ah.
Laakiin markan uma aanaan iman inaan kaala hadalno shaleemada, filimada ama saamaynta gaarka ah, laakiin halkii ay ka ahayd Saamaynta Kadib iyo qaab-dhismeedka. Haddii aad aqoon u leedahay barnaamijkan, waxaad ogaan doontaa inay jiraan qaabab aad ku codsan karto inaad wax ka beddesho fiidiyowyadaada.
Hagaag, Maqaalkan waxaan ku tusi doonaa qaar ka mid ah codsiyada ama mareegaha ugu fiican ee aad ka heli karto., iyo haddii ay dhacdo inaad weli si buuxda uga warqabin barnaamijkan, waxaan hoos ku sharxi doonaa waxa uu yahay, waxa uu qabanayo iyo sifooyinka ugu muhiimsan ee ka dhigaya mid xiiso leh.
1 Waa Maxay Saamaynta Kadib
1.1.2 Kadib Saamaynta iyo Premiere Pro
2 Barnaamijyada ugu fiican ee la soo dejisan karo templates
2.1 Gantaal Gantaal
2.2 Mashruuca AE
2.4 99 Tilmaamo
2.5 Tusaalooyinka AE ee bilaashka ah
3 Barnaamijyo kale oo la mid ah
3.3 Apple Motion
Waa Maxay Saamaynta Kadib
Haddii aan si kooban u soo koobno ​​oo aan u fahanno sida ugu macquulsan waxa uu barnaamijkani ku saabsan yahay, Waxaan dhihi karnaa in After Effects ay tahay software ka mid ah codsiyada kala duwan ee Adobe uu naqshadeeyay. Ujeeddadeeda ugu weyn waa soo saarista ka dib ee sawirada dhaqaaqa sida fiidyowga, habkan waxaan ku noolayn karnaa ama xitaa ku ciyaari karnaa saddex-cabbir meelo bannaan, iyada oo ay ugu wacan tahay qalabyada badan ee la heli karo.
Wali ma aan magacaabin, laakiin si aad si fiican u fahanto, software-ka ka dhigaya mid firfircoon Waa qayb ka mid ah qaybta garaafyada dhaqdhaqaaqa. Waa magaca tilmaamaya dhammaan codsiyada ka tirsan adduunka ama qaybta maqalka. Sidan oo kale waxaan ka abuuri karnaa filimada leh saameyn gaar ah, si ay u xayaysiisyada dhibco. Waxa aad gacanta ku haysaa wax kasta oo ku xeeran qaybta maqal-muuqaalka
Kadib Saamaynta waxaa loo tixgaliyaa barnaamijka sida ugu wanaagsan iyo ikhtiyaarka ugu horreeya oo aan shaki ku jirin suuqa oo dhan. Tani waa sababta oo ah waxay ilaalinaysaa is-dhexgalkeeda iyo qalabyada ka dhigaya barnaamij aad u xiiso badan.
Kadib Saamaynta iyo Premiere Pro
Inta badan waxay la xiriirtaa barnaamijyada kale ee Adobe ee la midka ah sida Premiere Pro. Farqiga ayaa ah in Premiere waxaa loogu talagalay kuwa hadda bilaabaya adduunka animation-ka iyo After Effects waxay ilaalisaa dhib badan, taas oo ka dhigaysa barnaamij loogu talagalay xirfadlayaasha.
Tilmaamo kale oo iyaga ka sooca ayaa sidoo kale ah hawlaha, halka Premiere uu abuuri karo montages video. Kadib Saameyntu waxay aad ugu janjeertaa dhanka saamaynta gaarka ah iyo dunida cilmiga khayaaliga ah.
Shaki la'aan, sifooyinka kale ee barnaamijkani waa inuu leeyahay taxane taxane ah, kaas oo fududeynaya shaqada haddii aad tahay qof ku cusub qaybtan. maadaama aad ka heli karto faylal badan oo leh saameyn hore loo abuuray.
Ugu dambeyntii, waa in la ogaadaa in barnaamijkani uu la shaqeeyo software-ka loo arko inuu yahay mid ka mid ah software-yada ugu awoodda badan suuqa, sidaas darteedna ka dhigaya. mid ka mid ah barnaamijyada ugu fiican si loo abuuro animations.
Barnaamijyada ugu fiican ee la soo dejisan karo templates
Kaydka Gantaalka ayaa la mid ah bangiga sawirka laakiin leh qaabab. Qaababyo kale oo badan, waxa kale oo jira hababyo diyaar u ah Saamaynta Kadib. Waxa lagu garto qalabkani waa tayada ay ku bixiso mid kasta oo iyaga ka mid ah, bixinta qaabab taxane ah oo ku siin kara taabasho xirfad leh fiidyahaaga.
Farqiga u dhexeeya ayaa ah inaysan xor ahayn laakiin marka aad iibsato waxaad u isticmaali kartaa nooc kasta oo mashruuc ah. Shaki la'aan, haddii aad raadinayso habab loogu talagalay Saamaynta Kadib, tani waa ikhtiyaar wanaagsan.
Qalabkani waa mid kale oo ka mid ah kuwa badan oo jira si loo soo dejiyo hab-raacyada Saamaynta Kadib. Waa qalab sahlan in la isticmaalo, maadaama aan loo baahnayn rukhsad sare. Intaa waxaa dheer, waxaad ku dhex milmi kartaa qaybo badan oo ay leedahay, taas oo ka dhigaysa mid aad u xiiso badan.
Sidoo kale, waad heli kartaa qaabab ku habboon mid kasta oo ka mid ah mashaariicdaada. Sidoo kale shaki la'aan waa ikhtiyaarka ku habboon in la bilaabo tafatirka fiidiyowyadaada oo loo beddelo fiidiyowyo xirfad leh iyo hal abuur leh. Sidoo kale, qaar badan oo iyaga ka mid ah waa bilaash. Maxaa ka fiicnaan kara?
Shareae waa agab online ah oo loogu talagalay Saamaynta Kadib, halkaas oo marka lagu daro xulashooyinka kale, ay sidoo kale leedahay suurtagalnimada in la soo dejiyo qaab-dhismeedka. Farqiga u dhexeeya qalabkan iyo kii hore ayaa ah in Shareae aad iska diiwaan geliso si aad u bilowdo raadinta templates. Waxa kale oo ay leedahay suurtogalnimada in la soo dejiyo qaababka bilaashka ah iyo kuwa qaaliga ah labadaba.
Shaki la'aan waa ikhtiyaarka ugu fiican haddii aad raadinayso moodallo ama ilo kale oo xiiso leh kuwaas oo laga yaabo inay ku xiiseeyaan naqshadahaaga Saamaynta Kadib. Weligeed may fududayn in la helo qaab-dhismeedka noocaan ah iyo waliba lacag la'aan.
Waa mid ka mid ah boggaga bixiya qaabab badan oo kala duwan oo loogu talagalay Saamaynta Kadib. Intaa waxaa dheer, mid kasta oo ka mid ah qaab-dhismeedkani waa mid si buuxda loo tafatiran karo, kaas oo si weyn u fududeynaya habka shaqada wakhtiga saxda ah ee tafatirka. Sifada kale ayaa ah in mid kasta oo ka mid ah agabka boggani ka kooban yahay, kuma xidhna nooc kasta oo ogolaansho ah ama liisan, taas oo ka dhigaysa xitaa sahlan in loo isticmaalo dibadda codsiyada kale.
Cilada kaliya ee jirta ayaa ah inaad u baahan doonto turjumaan si aad awood ugu yeelato inaad turjunto bogga, maadaama uu si buuxda ugu yimid Ingiriis. Marka laga reebo, waa qalab aad u fiican oo loo isticmaali karo ujeedooyin badan.
Haddii aan soo koobno ​​bog aad ka soo dejisan karto qaabab bilaash ah ama qiimo leh oo loogu talagalay Saamaynta Ka dib oo sidoo kale leh fursado badan oo kala duwan iyo saameyn gaar ah, waxaan shaki ku jirin inaan ka hadlayno Hababka AE-da ee Bilaashka ah. Boggaan gaarka ah wuxuu leeyahay saameyno taxane ah oo aad ka heli karto waxyaabaha qarxa ama saameynaha animation. Waa aaladda ugu fiican haddii aad raadinayso isku-dhafka khayaali iyo khiyaali.
Shaki la'aan waa kheyraad wanaagsan in la bilaabo abuurista iyo naqshadeynta fiidiyowyadaada qaab aad u xirfad leh oo shakhsi ahaaneed. Shaki la'aan waa ikhtiyaarka ugu fiican.
Barnaamijyo kale oo la mid ah
Haddii aan doorano xulashooyin kale oo badan oo beddelka Saamaynta Kadib, waxay shaki la'aan noqon doontaa Filmora. Waa bedel aad u fiican oo diyaar u ah Mac iyo Windows labadaba. Iyada, waxaad awoodi doontaa inaad bilowdo abuurista fiidiyowyadaada ugu horreeya iyo taxanaha fiidyahaaga. Intaa waxaa dheer, waxa ay leedahay taxane ah oo lacag la'aan ah iyo saamaynta. Saameyntu waxay noqon kartaa mid firfircoon ama waxaad heli kartaa beddelaadyo kale sida filtarrada sawirka. Shaki la'aan waa ikhtiyaarka ugu fiican ee lagu bilaabo.
Waa shaki la'aan mid kale oo ka mid ah beddelka ugu wanaagsan ee lagu beddeli karo barnaamijyada sida Saamaynta Kadib. leh Nuke waxa kale oo aad fursad u haysataa inaad abuurto montages fiidyaha oo aad u fiican. Barnaamijkan waxaa horey loogu isticmaalay mashruucyada filimada waxqabadka sare leh sida qaar ka mid ah filimada ugu fiican, oo ay ku jiraan Avatar.
Naqshadeeyayaal badan ayaa horeyba u isticmaali jiray kheyraadkan si ay u abuuraan animations heer sare ah, sidoo kale waxay leedahay isdhexgal ballaaran. Dhibaatada kaliya ayaa ah in ay u baahan tahay heer sare, maadaama loo tixgeliyo barnaamij ku habboon xirfadlayaasha animation. Shaki la'aan, waa mid ka mid ah fursadaha ugu fiican haddii aad horeba khabiir ugu tahay adduunkan.
Xigasho: Apple Support
Apple Motion waa mid ka mid ah barnaamijyada Apple ee takhasuska u leh isu-ururinta iyo abuurista animation-ka muuqaalka. Waxaad u abuuri kartaa animations weyn Mac sidoo kale waxaad ku dari kartaa animations 2D iyo 3D. Ka mid ah sifooyinkeeda ugu xiisaha badan, waa in la ogaadaa in ay leedahay sawirro taxane ah oo leh waxqabad sare, waxay leedahay doorashooyin kale oo aad sidoo kale habeyn karto iftiinka, codka ama xitaa saturation. Waa qalabka ugu fiican ee Apple ku caashaqay kuwaas oo u baahan hagaajinta ee tafatirka ay videos.
Natron, oo ka duwan qalabkii hore, waa barnaamij tafatirka fiidiyooga iyo abuurista animation kaas oo sidoo kale diyaar u ah nidaamyada hawlgalka sida Windows iyo Mac.
Waa barnaamij ku habboon haddii aad tahay naqshadeeye garaaf, maadaama uu leeyahay hawlo taxane ah oo aad u habayn karto sidaad rabto.. Waxa barnaamijkan ku sifoobay tafatirihiisa, Waxay leedahay tifaftire aad u fiican iyo xulashooyin badan oo kala duwan oo laga dooran karo. Waxa kale oo ay leedahay tracker 2D kaas oo kuu ogolaanaya inaad ku ciyaarto doorashooyin kale oo badan.
Dhab ahaantii waa ikhtiyaarka ugu fiican.
Ka dib markii Effects waa in ay taariikhda mid ka mid ah barnaamijyada ugu fiican par heer sare si ay u nooleeyaan oo ay u abuuraan videos saamaynta weyn. Ma aha oo kaliya, laakiin sidoo kale waxay leedahay awood ay ku dhex maraan qalabkeeda badan. Haddii aadan gabi ahaanba ka warqabin barnaamijkan, waxaan rajeyneynaa inaad wax yar ka baratay. Waxa kale oo aanu rajaynaynaa in agabka aanu soo jeedinay ay wax weyn ku tari doonaan oo aad noqon doonto xirfadle dhanka maqalka ah. Hadda waxa la gaadhay wakhtigii aad tacabka gali lahayd oo aad tijaabin lahayd.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Qaababka Saamaynta Kadib ee Bilaash ah